Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Supporting democracy and human rights struggle in Burma
Posted on September 23, 2013 by Free Burma Info
မွတ်စလင် အိမ်ယာစီမံကိန်း ဆန္ဒပြသူနှစ်ဦး ထောင်သုံးလကျ
Posted on September 23, 2013 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Vocational Training Program Driving course (2) 12 former political prisoners wer…
12 former political prisoners were attended in this course.Trainees were enrolled by AAPP-B and FPPs(Former Political Prisoners) at TV Driving Training Center in Rangoon.
REHABILITATION PROGRAMS OF AAPP-B FOR FORMER POLITICAL PRISONERS
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2013-09-23 08:03:11
Emergency Healthcare Support for former political prisoners
Posted on September 22, 2013 by Free Burma Info
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-09-22 21:52:35
ဟုန်ရှင်းအလုပ်သမား သပိတ်စခန်းသို့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဝန်းရံ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၂။ ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ဟုန်ရှင်းအအေးခန်းစက်ရုံမှ အလုပ်သမား တစ်ရာကျော်တို့ သည် ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံအနီးတွင် သပိတ်စခန်းဖွင့်၍ နေ့လည် နှစ်နာရီခန့်မှ စတင်ကာ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများကို တောင်းဆိုလျက်ရှိရာ ည၁၁နာရီခန့်တွင် ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုဌေးကြွယ်အပါအဝင် ခေါင်းဆောင်များနှင့် အရပ်ဖက်လူ့မှု အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ လာရောက်၍ ဝန်းရံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ကြသည်။ “ဒီကနေ့ အစိုးရကနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပါပြီဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်သူတွေမှာ ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ အလုပ်သမား တွေမှာလည်း အလုပ်သမား အခွင့်အရေးရှိတယ်။ လယ်သမား တွေမှာလည်း လယ်သမား အခွင့်အရေး ရှိတယ် ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အခက်အခဲမျိုးပဲရှိရှိ ရပိုင်ခွင့်တွေကို တောင်းဆိုနေတာဟာ ကျွန်တော်အားလုံး တသားတည်း ရှိနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ချည်းပဲ မဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ အင်းအားစုပေါင်းစုံ ရှိနေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကို တောင်းတာဟာ ဒီမိုကရေစီမှာ အဓိက ကျတဲ့ အကြောင်းပါ။ ဒါကို အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် ဒါဟာမတရားမှုပါ။ ဒါဟာ ဥပဒေကို ကျော်လွန်ခြင်း ပါလို့ပဲ ကျွန်တော် ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ကိုဌေးကြွယ်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒပြနေသောသပိတ်စခန်း အနီးတွင် လုံခြုံရေးချထားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း “ဒီကနေ့ ဒီမှာ လုံခြုံရေး အင်အားတွေ ချထားပါတယ်။ ဒါဟာ အင်အားသုံးပြီး ဖြိုခွင်းရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ အဆိုပါအလုပ်သမားများသည် လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လ ၁၀ရက်နေ့ကလည်း ဆန္ဒပြသပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပြီး သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် ညှိနှိုင်း ဖြန်ဖြေရေး အဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းပေးရာတွင် အလုပ်သမားများ ဘက်မှ တောင်းဆိုသည့် စက်ရုံရှေ့တွင် စုပေါင်းထိုင်နေခြင်း မပြုဘဲ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်ကြရန်နှင့် အလုပ်ရှင်မှလည်း အငြိုးအတေးမထားရန် စသည့် အချက်အပါအဝင် ၁၀ချက်ကို ဒုစက်ရုံမှူး ဦးနေထွန်းစံ ၊ အလုပ်သမားများ၊ နှင့် နှစ်ဘက်သက်သေများက ခုံသမာဓိရုံး၏ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များထံတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတာခဲ့ကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် စက်ရုံဘက်မှ နစ်နာကြေး ပေးကာ အလုပ်ထုတ်သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဆက်လက် သပိတ်မှောက်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားများက ပြောကြသည်။ မြန်မာ့ခေတ်
Posted on September 22, 2013 by People's Rallying Cry
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ဟုန်ရှင်းအလုပ်သမားများကို ၀န်းရံထောက်ခံသော ချီ…
မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ဟုန်ရှင်းအလုပ်သမားများကို ၀န်းရံထောက်ခံသော ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲများ ဖော်ဆောင်တော့မည် ဖြစ်ပါသည်။
တရားမျှတမှုကို လိုလားသော ပြည်သူလူထု အပေါင်းမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
မတရားသော ပုဒ်မ(၁၈)ကို မမှုပဲ မိမိတို့ ၏ အခွင့်အရေး နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို ကျင့်သုံးသည့်အနေဖြင့် ဆန္ဒပြခွင့် မတင်ဘဲ ချီတက် သပိတ်တိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
&#x107f;&#x1019;&#x1014;&#x1039;&#x1019;&#x102c;&#x108f;&#x102d;&#x102f;&#x1004;&#x1039;&#x1004;&#x1036; &#x1010;&#x1005;&#x1039;&#x108f;&#x102d;&#x102f;&#x1004;&#x1039;&#x1004;&#x1036;&#x101c;&#x1036;&#x102f;&#x1038;&#x1021;&#x108f;&#x103d;&#x1036; &#x1037;&#x101f;&#x102f;&#x1014;&#x1039;&#x101b;&#x103d;&#x1004;&#x1039;&#x1038;&#x1021;&#x101c;&#x102f;&#x1015;&#x1039;&#x101e;&#x1019;&#x102c;&#x1038;&#x1019;&#x103a;&#x102c;&#x1038;&#x1000;&#x102d;&#x102f; &#x1040;&#x1014;&#x1039;&#x1038;&#x101b;&#x1036;&#x1031;&#x1011;&#x102c;&#x1000;&#x1039;&#x1001;&#x1036;&#x1031;&#x101e;&#x102c; &#x1001;&#x103a;&#x102e;…
People's Rallying Cry's Facebook Wall 2013-09-22 14:56:08
ဟုန်ရှင်း အအေးခန်းစက်ရုံက အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြ
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်က ဟုန်ရှင်း(Home Shin) ရေငန်နှင့် ရေချိုငါးမျိုးစုံထုတ်လုပ်ရေး အအေးခန်းစက်ရုံက အလုပ်သမား ၁၀၀ ခန့်ဟာ ဒီနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီကျော်လောက်ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအလုပ်သမားတွေက သူတို့ကို အလုပ်ပြန်ခန့်ဖို့အတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ Photo : RFA/ Win Naing
ပြည်သူ့ ဘုန်းဘုန်းများ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ ကို ကြွချီတော် မူပါဘုရား။ ပြည်သူ့ ခွ…
ပြည်သူ့ ဘုန်းဘုန်းများ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ ကို ကြွချီတော် မူပါဘုရား။
ပြည်သူ့ ခွပ်ဒေါင်းများ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ ကို လာရောက်ပူးပေါင်းကြပါ။
ပြည်သူ့ လယ်သမားများ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ ကို လာရောက် ပူးပေါင်းကြပါ။
မိဘပြည်သူ အပေါင်းတို့ သပိတိုက်ပွဲဝင်သူများအား လိုအပ်သည်များ ကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါ။
&#x107f;&#x1015;&#x100a;&#x1039;&#x101e;&#x1030; &#x1037;&#x1018;&#x102f;&#x1014;&#x1039;&#x1038;&#x1018;&#x102f;&#x1014;&#x1039;&#x1038;&#x1019;&#x103a;&#x102c;&#x1038; &#x107f;&#x1019;&#x102d;&#x1033; &#x1037;&#x1031;&#x1010;&#x102c;&#x1039;&#x1001;&#x1014;&#x1039;&#x1038;&#x1019;&#x1031;&#x101b;&#x103d; &#x1037;&#x1000;&#x102d;&#x102f; &#x107e;&#x1000;&#x103c;&#x1001;&#x103a;&#x102e;&#x1031;&#x1010;&#x102c;&#x1039; &#x1019;&#x1030;&#x1015;&#x102b;&#x1018;&#x102f;&#x101b;&#x102c;&#x1038;&#x104b; &#x107f;&#x1015;&#x100a;&#x1039;&#x101e;&#x1030; &#x1037;&#x1001;&#x103c;…
ရန်ကုန်မြို့ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ သပိတ်စခန်းမှ သပိတ်မှောက် အလုပ်သမားများအား မိဘပြ…
ရန်ကုန်မြို့ မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ သပိတ်စခန်းမှ သပိတ်မှောက် အလုပ်သမားများအား မိဘပြည်သူအပေါင်းမှ မိမိတို့ တတ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အားပေးကူညီ ၀န်းရံပေးကြပါ။
ဘ၀တူအလုပ်သမား အင်အားစုများလည်း သပိတ်မှောက် အလုပ်သမားများကို ၀န်းရံပူးပေါင်းပေးကြပါ။
ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသား ပြည်သူအပေါင်းတို့ မှ မိမိတို့ ကိုယ်စွမ်း ညဏ်စွမ်း ရှိသရွေ့ အားပေးကူညီ ထောက်ခံပေးပါရန် အလေးအနက် ပန်ကြား မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
&#x101b;&#x1014;&#x1039;&#x1000;&#x102f;&#x1014;&#x1039;&#x107f;&#x1019;&#x102d;&#x1033; &#x1037;&#x107f;&#x1019;&#x102d;&#x1033; &#x1037;&#x1031;&#x1010;&#x102c;&#x1039;&#x1001;&#x1014;&#x1039;&#x1038;&#x1019;&#x1031;&#x101b;&#x103d; &#x1037;&#x101e;&#x1015;&#x102d;&#x1010;&#x1039;&#x1005;&#x1001;&#x1014;&#x1039;&#x1038;&#x1019;&#x103d; &#x101e;&#x1015;&#x102d;&#x1010;&#x1039;&#x1031;&#x1019;&#x103d;&#x102c;&#x1000;&#x1039; &#x1021;&#x101c;&#x102f;&#x1015;&#x1039;&#x101e;&#x1019;&#x102c;&#x1038;&#x1019;&#x103a;&#x102c;&#x1038;&#x1021;&#x102c;&#x1038; &#x1019;&#x102d;&#x1018;&#x107f;&#x1015;…
မတရားသဖြင့် ဖိနှိပ်ခံနေရသော အလုပ်သမားအပေါင်းအား ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းမှ မိမိ…
မတရားသဖြင့် ဖိနှိပ်ခံနေရသော အလုပ်သမားအပေါင်းအား ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအပေါင်းမှ မိမိတို့ တတ်စွမ်းသမျှ ၀န်းရံကူညီကြပါ
င်္From Ko Han Win Aung's FB
&#x1019;&#x1010;&#x101b;&#x102c;&#x1038;&#x101e;&#x107f;&#x1016;&#x1004;&#x1039;&#x1037; &#x1016;&#x102d;&#x108f;&#x103d;&#x102d;&#x1015;&#x1039;&#x1001;&#x1036;&#x1031;&#x1014;&#x101b;&#x1031;&#x101e;&#x102c; &#x1021;&#x101c;&#x102f;&#x1015;&#x1039;&#x101e;&#x1019;&#x102c;&#x1038;&#x1021;&#x1031;&#x1015;&#x102b;&#x1004;&#x1039;&#x1038;&#x1021;&#x102c;&#x1038; &#x101b;&#x101f;&#x1014;&#x1039;&#x1038;&#x101b;&#x103d;&#x1004;&#x1039;&#x101c;&#x1030; &#x107f;&#x1015;&#x100a;&#x1039;&#x101e;&#x1030;&#x1021;&#x1031;&#x1015;&#x102b;&#x1004;&#x1039;&#x1038;&#x1019;&#x103d; &#x1019;&#x102d;&#x1019;&#x102d;…
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-09-22 06:30:05
&quot;နေပြည်တော်က လယ်သမားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ပဋိပက္ခ ဝဲကြီးရွာသား ၁၁ ဦးကို တရားစွဲဆို&quot;
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ညက နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဲကြီးရွာမှာ ဒေသခံ ရွာသားတွေ နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝဲကြီးရွာသား ၁၀ ဦးကို ပုဒ်မ ၃ ခုနဲ့ တရားစွဲထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီလို လုပ်ရပ်ဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်ကြောင်း ၊ ဥပဒေအရ ဆက်လက် အရေးယူသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ၂ဝ ရက် နေ့ညနေပိုင်းမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီရွာသားတွေထဲက တချို့ကို ရုံးချိန်းပျက်ကွက်တာကြောင့် ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးရာမှာ အခုလို ရွာသားတွေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နေပြည်တော် ကောင်စီ နယ်မြေ၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇေယျာသော်ကတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့လုပ်ရပ်တွေပြုမူခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ပဋိပက္ခကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးနဲ့ ရွာသား ၅ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ကျည်တောင်ကန်ရဲစခန်းမှူး ဦးစိန်သောင်းက ပြောပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စအတွက်ဝဲကြီးရွာသား ၁၀ ဦးကို နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ရဲမှူးက တရားလိုပြုလုပ်ပြီး ပုဒ်မ ၃၃၃ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူကို မတရားနာကျင်စေမှု အပါအဝင်ပုဒ်မ ၃ ခုနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted on September 21, 2013 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Healthcare support to Tun Lin Oo (aka) Dolay on Sept 19, 2013.
Healthcare Support for former political prisoners
Posted on September 21, 2013 by Free Burma Info
လင်္ကာ: မအူပင်ထောင်ထဲက ၆ ယောက်
Posted on September 20, 2013 by Free Burma Info
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-09-20 19:48:56
Maung Luu Nge's Photos
(အနီးကပ်ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။) ၁၉၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂမြက်ခင်းပြင်မှာ ကျင်းပတဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် တရားဝင်ဖြစ်မြောက်ရေးဗဟိုကော်မတီ၏ ကျောင်းသားထုအစည်းအဝေးတွင် ဟောပြောနေစဥ။် မကျဆုံးမှီ ၃ နှစ်ခန့်အလိုက ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲတွင် သူရဲ့ ကဗျာကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ ၂ ဘာသာဖြင့် ရွတ်ဆိုသွားပါသည်။
(အထက်ပါ ပုံများသည် မောင်သော်က`မိသားစုပိုင် ဖြစ်သည်။ ကူးယူလိုလျင် ခရစ်ဒစ်ပေးကြရန်နှင့် ခွင့်တောင်းပါရန်။) — with <a href="https://www.facebook.com/yeeyee.nay?viewer_id=0" data-ft="&#123;&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;&#125;" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1755777800&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22viewer_id%22%3A0%7D">Nay Yee Yee</a> and6others in <a href="https://www.facebook.com/pages/Chiang-Mai-Thailand/111591762192643?ref=stream&amp;viewer_id=0" data-ft="&#123;&quot;tn&quot;:&quot;P&quot;&#125;" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=111591762192643&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3Anull%2C%22viewer_id%22%3A0%7D">Chiang Mai, Thailand</a>.
Free Burma Info's Facebook Wall 2013-09-20 19:48:44
ခွန် ဒီးယမ်'s Photos
အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းမှ အမျှဝေမယ်
“နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားအတွင်းရှိ အာဏာလိုချင်သောသူများသည် လက်နက်အားကိုး အကြမ်းဖက် ကာရယူခြင်းသည် ယနေ့အချိန်အထိ မှားယွင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး အင်မတန် အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဆိုသည်ကို သွေး အလိမ်းလိမ်းဖြင့် ၈၈ အရေးတော်ပုံအတွင်း ကျဆုံးခဲ့သည့် လူမမည် စာမမြောက်သည့် လူငယ်ကျောင်းသားလေးများ၏ ဖြစ်ရပ်က သမိုင်းတွင် အလေးနက် ကျန်ရစ်နေမည်”ဟု ၈၈ အရေးတော်ပုံ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် မ၀င်းမော်ဦး(၂၅)နှစ်ပြည့် ငွေရတု အောက်မေ့ဘွယ် အခမ်းအနားတွင် NLD ပါတီ၏ နာယက ဦးတင်ဦး ပြောသည်။
မ၀င်းမော်ဦးသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံကို ကိုင်ဆောင်ကာ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် ဆန္ဒပြခဲ့သည့် ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် ကုန်သည် လမ်းထောင့်တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
မ၀င်းမောင်ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဝင်းကြူက “ဒီမိုကရေစီမရမချင်း သူ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီး အမျှမဝေဖို့ ကျွန်တော့်သမီး မ၀င်းမော်ဦးကို ကတိပေးထားတယ်။ ၂၅ နှစ်လုံးတိုင်အောင် သမီးနာမည်ခေါ်ပြီး ယနေ့ အချိန်ထိ အမျှမဝေသေးပါဘူး။ အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းမှသာလျှင် အမျှဝေမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်” ဟု ပြောသည်။
Mizimma news- 20-9-2013
Page 432 of 439« First‹ Previous428429430431432433434435436Next ›Last »
© Friends of MoeMaKa – Free Burma News Collection - Powered by Wordpress and Citizen Journal